Ama-CSGO Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Thenga okungcono kakhulu kwe-CSGO Aimbot, i-ESP, iWallhack, nokunye okuningi khona lapha eGamepron. Ukulahlekelwa akuyona inketho uma usebenzisa ama-hacks ethu! Ukukopela ngendlela ehlakaniphile futhi uthenge ukhiye namuhla.
Usuvele uthenge i-CSGO Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Sicela wazi: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks ethu e-CSGO, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu CSGO Hacks
Ama-CSGO Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, i-Wall Hacks nokuningi
Thenga CSGO Hacks in 4 izinyathelo
Khetha i-CSGO kukhathalogi yethu enkulu yama-hacks nama cheats, atholakala kuphela ku-Gamepron!
Khetha i-hack evumelana nezidingo zakho
Khetha izici zokugenca ezilingana nezidingo zakho, noma ngabe i-aimbot noma i-wallhack
Khokhela ukhiye wakho womkhiqizo usebenzisa izindlela zethu zokukhokha eziphephile eziyi-100%, ugcine abasebenzisi bethu bephephile!
Ngemuva kokuthi uthole ukhiye womkhiqizo, okudingeka ukwenze ukulanda i-CSGO!
Kungani ama-Gamepron CSGO hacks?
Ikhwalithi isalokhu igxile ekuphela kweGamepron kusukela saqala ukwethula. Ukuxhuma abasebenzisi bethu ngamathuluzi we-lackluster akuyona inqubo yebhizinisi engcono kakhulu, kodwa futhi kuzoba nomthelela ekuhlangenwe nakho kwakho komsebenzisi. Abantu bayaqhubeka nokuthembela ku-Gamepron ngezidingo zabo zokugenca ngoba abanye abahlinzeki abakwazi ukuqhubeka, futhi lokho kungubufakazi bokusebenza kwethu kanzima! Singasho ngokuqiniseka ukuthi ukugenca kwethu kwe-CSGO kuzokusiza uwine ukufana okuningi, futhi konke okumele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo bese ulanda ithuluzi. Abanye abathuthukisi bazokuphoqa ukuthi ufake ama-cheats ngesandla, kepha lokho akuvamile ukuba lapha.
Uma ikhwalithi akuyona inkinga yakho enkulu, sinezintengo ezingabizi uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki be-premium hack. Ungathola ama-hacks amaningi ashibhile e-CSGO online, kepha akekho noyedwa kubo ozokunikeza izinzuzo ezifanayo ne-CSGO. Ezinye zalezi zinto ezishibhile ze-CSGO zingaholela ekuvinjelweni kwe-akhawunti yakho, njengoba zingazihluphi ngokusebenzisa inqubo yokuvikela ukukopela esebenzayo. I-Gamepron inokuphamba kwe-CSGO engatholakali, enikeza abasebenzisi ikhono lokugenca noma nini lapho befuna ngaphandle kwemiphumela.
I-CSGO iyithuluzi elivezwe ngokuphelele eline-CSGO aimbot, wallhack, kanye ne-radar. Inani lezinketho ze-ESP ongakhetha kuzo wedwa lizokwanela ukuphakamisa ilukuluku lakho, njengoba ubona okungaphezu kwezitha nje ngezindonga! Ukuthola izikhali eziwusizo, igesi, ukuqhuma, nokunye okuningi kwe-ESP kungenzeka lapho usebenzisa i-CSGO. Akekho ongakwazi ukufihla ulaka lwakho lapho leli thuluzi lisebenza, futhi kulula kakhulu ukulisebenzisa kangangokuba nabaqalayo bangaphumelela ngalokhu khohlisa. I-Radar ingesinye isici esiwusizo amanye ama-hacks amaningi we-CSGO angakwazi ukusisebenzisa, ngakho-ke awusoze wasala ungazi ngenkathi ulwa - uma umuntu ecathama ekhoneni, abasebenzisi beGamepron bazobalungela.
Izikhumba ziyingxenye enkulu yeCounter-Strike: Global Offensive, futhi ezinye zazo zingabiza ngokuhlekisa (usebenzisa imali yangempela, khumbula!). Yingakho le hack ilungele labo abajabulela izimonyo futhi ngoba ungalungisa izikhumba zakho ngaphandle kokuzikhokhela. I-Hand, Glove, Knife, nezinye izono ze-Gun zingalungiswa kusetshenziswa i-CSGO hack, ngakho-ke cabanga ngakho njengokutshalwa kwezimonyo futhi.
Kuningi okuningi okunikezwayo nge-CSGO, ngakho-ke umbuzo wangempela uthi kungani ungasebenzisi?
I-CSGO Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-CSGO Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Into ye-CSGO ESP enezihlungi
Izexwayiso zezitha zesixwayiso se-CSGO
Imodi ye-CSGO super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
CSGO bone & aim key key okulungisekayo.
Isinxephezelo se-CSGO Recoil
Impela CSGO Hack Izici
Umdlali we-CSGO ESP
Abaphikisi beSpot ngisho nabalingani beqembu kulo lonke imephu futhi ngokusebenzisa izindonga besebenzisa i-CSGO Player ESP yethu! Akekho ongacasha ngeso lakho elibona konke.
Ama-Player ESP angasiza kakhulu uma unika amandla i-Player Info. Bona amagama abo, imigoqo yezempilo, ngisho nebanga labo nge-Player Info.
Into i-ESP ilusizo olukhulu kumdlalo ofana ne-CSGO. Ukuqhuma kwamabala, izikhali, nanoma iyiphi enye into efakiwe emdlalweni kusetshenziswa i-Item ESP yethu.
Ngaphandle kwe-aimbot enokwethenjelwa, ukugenca kungabonakala kungenangqondo ngezinye izikhathi. Ngokujabulisayo, sine-CSGO aimbot ehamba phambili ku-inthanethi khona lapha eGamepron.
Ithrekhi ye-CSGO Bullet (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
Bullet Track isetshenziselwa ukubona lapho isibhamu sakho sihlala khona, sikuvumela ukuthi uqinisekise ukubulala ngokuxhamazela. Ilungele izimpi zombili ibanga elifushane naphakathi!
CSGO bone & aim key key okulungisekayo
Lungiselela i-aimbot yakho ye-CSGO ukuze ivumelane nezidingo zakho zonke, njengoba sinikeza ukuthandwa kwethambo futhi sihlose izinketho zokhiye ezilungiswayo. Yibani omkhulu Gamepron!
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-CSGO aimbot
Amasheke abonakalayo azokuvumela ukuthi ubone ukuthi izinhlamvu zakho ziya kuphi, futhi azokhiya kuphela uma isitha singabulawa (lapho zibonakala).
I-Recoil ibulale abantu abaningi esikhathini esedlule, futhi isazoqhubeka nokwenza kanjalo. Ngaphandle kokuthi usebenzise i-CSGO hack!
Isici sethu Sesixwayiso silungile kubo bobabili abadlali be-novice nabanolwazi. Thola isexwayiso lapho izitha ziqonde kuwe nge-CSGO!
Imodi ye-CSGO super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Ukulimala kokuwa akuseyona inkinga lapho kudlalwa i-CSGO. Yehla ezulwini ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni ngenkathi usebenzisa i-CSGO!
Yiba Umdlali Ohamba phambili we-CSGO Emhlabeni
Ukuba umdlali ongcono ku-Counter-Strike: I-Global Offensive ingenziwa ngamahora wokuzijwayeza okhathazayo nokufunda amamephu. Kungumsebenzi onzima ukuba umdlali omuhle ngaphandle kosizo, kepha i-Gamepron ingakuguqula ube umdlali osezingeni elikhokhelayo ngemizuzu nje embalwa! Zonke izici ezidingekayo zokwehlisa isitha sakho ziku-CSGO, ngakho-ke ungaphuthelwa yisigenge esingu- # 1 se-CSGO esitholakala emakethe!
Ama-Hacks nama-Cheats adumile
I-CSGO ESP neWallhack
Unyawo, Ukulimala Okuphezulu kanye neHack Hack
Amanye ama-Hacks we-CSGO nokukhohlisa
I-Counter-Strike: I-Global Offensive kufanele ibe ngomunye wabadubuli babantu abadumile abake bakhishwa, futhi lokho kungubufakazi besisekelo sabadlali abazinikele. Abantu bebelokhu bedlala i-Counter-Strike njenge-franchise ngaphezu kweminyaka eyishumi manje, futhi lokho kusho ukuthi kuzoba nabadlali abaningi abahle - uma uhlangana neqembu labo futhi ungazi ukuthi wenzeni, ungahlala njalo thembela i-CSGO. Ithuluzi alithathi amakhefu futhi alinazo izinsuku ezingekho emsebenzini, lizosebenza njalo uma ulivula.
I-Gamepron ingumhlinzeki we- # 1 we-CSGO hacks online, futhi uma ufuna ama-hacks e-CSGO athandwa kakhulu futhi ukhohlise online, yithi kuphela igama ongalethemba. Kudala sisebenza embonini esezingeni eliphakeme yokugenca, futhi sihlala sizimisele ukwamukela abasebenzisi abasha emndenini weGamepron. Yiba umdlali we-CSGO ongcono namuhla ngokuthola ukufinyelela ku-CSGO.
I-CSGO ifaka i-aimbot enamandla kakhulu enezici eziningi kakhulu kunangaphambili. I-Auto-Fire izokhipha ngokuzenzakalela isikhali sakho noma nini lapho umuntu esendaweni yokubulala, kuyilapho i-Smooth Aiming izogcina izinto zibukeka zemvelo. I-Autowall izoskena njalo ezindaweni eziqinile zokukhomba, futhi unganika amandla imodi enamathelayo ukuphoqelela iziphambano zakho ukuba "zinamathele" ezitheni. ISmoke Check izobheka igesi / intuthu yezitha ezingabonakali, ngenkathi i-RCS inikwe amandla okususa ukubuyela emuva nokubuyela emuva.
Ukunemba kuzoba yisici esinqumayo ezimpini zakho eziningi, futhi abadlali abanekhono eliphezulu bazonemba ngokunemba kwezemidlalo. Uma ufuna ukuhambisana nabadlali ababonakala beshaya njalo, uzodinga i-CSGO aimbot yethu! Imodi ethule ibuye isebenze kakhulu lapho uzama ukugcina umsulwa ngoba ukuba isigebenga esisobala akusona isimo esihle kunazo zonke. Yenza noma yini ongathanda ukuyishaya ku-Counter-Strike: Global Offful ngezingxoxo zethu ze-CSGO.
I-ESP neWallhacks kufanele ube nakho kunoma yikuphi ukukopela okuthembekile. Vumela umsebenzisi ukuthi abone izinto abanye abangaziboni, futhi lokho kukubeka ngamagama alula. Kunezinketho eziningi ze-ESP (Extra Sensory Perception) ngaphakathi kwe-CSGO ukuthi abantu bathuke ekuqaleni! Sebenzisa isici se-Player Info ESP ukubona ukuthi ngubani oza ngendlela yakho, nokuthi banempilo engakanani abasele (ngisho nebanga labo). Amathambo Omdlali angabonakala ezindaweni eziqinile, ngakho-ke abasebenzisi beGamepron bahlala bezinakekela. Akunandaba ukuthi indawo yakho yokwamukela izivakashi izama kangakanani, ukusebenzisa i-CSGO kuyindlela eqinisekisiwe yokuwina.
Ngaphandle kwe-wallhack ethembekile, ngeke uzikhandle kakhulu. Okunye ukukopela kwe-CSGO kuzoswela i-wallhack, noma kunikeze abasebenzisi okungahambelani nomthethosivivinywa. Ungazihluphi ngabahlinzeki abancane bese uthola izinto ezinhle zisuka! Finyelela i-CSGO ESP yethu ne-wallhack namuhla.
Izinhlamvu zakho zizopakisha isibhakela, zishiya abaphikisi bezibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uzishaye kangaka. Isici sethu Sokulimaza Okuphezulu sitholakala kuphela ku-CSGO, futhi yisona esizobhekisa kuphela izingxenye ezibulala kakhulu zomzimba wesitha. I-footprint isetshenziselwa ukulandelela izitha zakho phansi futhi uzinike izinhlamvu zesidlo sasemini, okuwumsebenzi onzima lowo - ngeFootprint, uzobona ukuthi ziye kuphi ngokuya ngezinyawo emhlabathini. Noma ngabe ulandela umuntu oyedwa noma iqembu lonke, ungathembela ku-Footprint ukukugcina wazi. Ukugenca kwethu amabanga kungabhanqwa namanye amabili ukudala “ithuluzi lokuqamekela” elifanele, okuyindlela elula kakhulu yokusebenza kuCounter-Strike: Global Offful.
Ukuwina ngeke kusaba mbalwa futhi kube kude kakhulu uma une-CSGO enikwe amandla, njengoba noma ngabe abasebenzisi bethu ngandlela thile befuna ukulahlekelwa, ithuluzi lisazokuphathela ibhizinisi.
Uma ucabanga ukuthi yilokho kuphela i-CSGO okufanele ikunikeze, wenza iphutha ngokudabukisayo. Inani lezici ezinikezwe abasebenzisi bethu nge-CSGO aligcini nje ngokuba likhulu, kepha zonke zilusizo ngokwazo. I-Radar izokunikeza ukubuka konke kwebalazwe lonke, ikuvumela ukuthi uqaphele ukuthi izitha zitholakala kuphi (ngaphambi kokuzilandelela bese uziqeda ngokufanele). Isikhundla Sokuhlola singasetshenziselwa ukubona ukuthi yini abadlali abathile abasezingeni elithile, sikunikeze ithuba lokugwema abadlali abasezingeni eliphakeme (hhayi ukuthi uzodinga lokho!). I-Bomb Timer izokwazisa ukuthi kusele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuqhuma, futhi ungasebenzisa iRadius ukukhombisa ububanzi obulinganiselwe besidubuli esihlosiwe.
Ungashintsha umbala wanoma yini nje kuleli thuluzi futhi. Noma ngabe amamodeli wesidlali owabona ngezindonga, noma ama-2DBoxes achaza izitha, ungalungisa konke ku-CSGO. Yenza ngokwezifiso isipiliyoni sakho nge-Gamepron!
Ama-CSGO Hacks Imibuzo
Kungani ama-CSGO Hacks ethu
I-Gamepron yaziwa ngokunikeza abantu ama-hacks atholakala kuphela, konke okutholakala lapha kuphela. Hhayi kuphela ukuthi ama-hacks ethu akhethekile, kepha awatholakali ngokuphelele! Akudingeki uzibuze ukuthi ngabe uyavinjelwa ngenkathi usebenzisa i-CSGO, ngoba usesandleni esihle lapho ukhetha ukugenca ngeGamepron. Musa ukusebenzisa i-CSGO hack eshibhile, ayifanele ingozi!
Kungani i-CSGO Aimbot yethu
I-CSGO Aimbot yethu ingathathwa njengeyona ephumelela kunazo zonke ezake zakhishwa (hhayi nje ngeCounter-Strike, sisho noma yimuphi umdlalo!). Inani lezici ongakhetha kuzo lingabonakala likhungathekisa kwabasanda kufika, kepha inqubo elula kakhulu ukusetha leli thuluzi. Enza ngendlela oyifisayo izilungiselelo zakho kusuka ekhanda kuye ozwaneni nge-CSGO! Akekho omunye umhlinzeki we-hack ongakusiza ngendlela esenza ngayo lapha.
Kungani i-CSGO ESP yethu
I-CSGO ESP elungile ingaguqula igagasi lempi eCounter-Strike, njengoba ungeke uphinde uhlaselwe ngokuhlaselwa. Ungabona izitha kusuka ebangeni elingamamayela ngokusebenzisa izindawo eziqinile, kanye nezinketho eziningana ezahlukahlukene ze-Item ESP - ulwazi luyisihluthulelo kulo mdlalo, futhi i-CSGO ESP yethu izokunikeza lonke ulwazi ongalufuna.
Kungani i-CSGO Wall Hack yethu
Sebenzisa i-wallhack yethu ye-CSGO ukuqonda ngokweqiniso ukuthi "ukufana nonkulunkulu" kumdlalo wevidiyo kumayelana nani. Ungasebenzisa ama-wallhacks ukubona ama-campers nabanye abadlali abanenkinga ngaphambi kokungena emlilweni wabo, okusho ukuthi ungahlela kusengaphambili! Ngeke babe nomkhondo lapho ukhona, futhi ukwehlisela abaphikisi bakho ngeke kusaba ngumsebenzi onzima.
Kungani i-CSGO NoRecoil yethu
Ukubuyiswa kungalawulwa ngokuqonda izikhali zakho, kepha kunenye indlela ongaqeda ngayo. Ukusebenzisa isici sethu seNoRecoil kuzosusa noma yiluphi uhlobo lokubuyiswa okuhlobene nokudubula isikhali sakho, kukuvumela ukuthi ube nezinga eliphakeme lokunemba ngaphandle kwesidingo se-aimbot. Yize kukuhle ukusebenzisa amakhono akho isikhathi nesikhathi, ungahlala uguqula i-aimbot futhi!
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-CSGO?
Landa ama-hacks amahle kakhulu ngokuthenga ukhiye womkhiqizo kithi ku-Gamepron. Lapho usuthengile ukhiye womkhiqizo, ungawusebenzisela ukulanda i-CSGO hack yethu - izinga lakho lokufinyelela lizonqunywa maqondana nokuthi uthengwe ngani ukhiye womkhiqizo. Akudingeki ukuthi ufake noma yini ngesandla, konke okumele ukwenze ukulanda i-hack bese uyethula ngaphambi komdlalo!
Kungani ama-CSGO hacks wakho ebiza kakhulu kunamanye
Amanani entengo yethu ahambisana nezinga lokuzikhethela okunikezwa lapha eGamepron. Sinezinombolo ezikhethiwe kuphela zezikhala ezenzelwe abasebenzisi bethu, okusho ukuthi abanye abantu ngeke bakwazi ukufinyelela ithuluzi ngaso sonke isikhathi. Uma ungafinyeleli ekukopeleni ngaphambi kokuthi kuphele, kuzofanela ulinde! Zonke azitholakali nazo.
Sisebenzisa imikhawulo yesikhathi ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi bethu banikezwa ulwazi oluhle kakhulu. Uma ufuna ukugenca isikhathi eside kunokujwayelekile, ungakhetha ukwenza kanjalo! Awudingi ukuzibophezela izinyanga ngesikhathi uma ungafuni, njengoba sinikeza ngosuku-1, iviki elingu-1, nokhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 we-CSGO. Uthola ukunquma izinga lakho lokufinyelela, hhayi thina.
Awesome CSGO Hack Izici